Exynos77904: Samsung ရဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားပရိုဆက်ဆာအသစ် Androidsis
Exynos77904 - အလယ်အလတ်တန်းစားအတွက် Samsung ပရိုဆက်ဆာအသစ်
Samsung သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပရိုဆက်ဆာများကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်တာ ၀ န်ယူသည့်အမှတ်တံဆိပ်အနည်းငယ်ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၁၉ ကိုမျှော်ကြည့်။ ကိုးရီးယားကုမ္ပဏီသည် Exynos 2019 နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုထားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အဆင့်မြင့်ပရိုဆက်ဆာ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်၎င်း၏အလယ်အလတ်တန်းစားအချို့အတွက်မကြာမီရောက်ရှိလာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသော်လည်းယခုနှစ်တွင်ရောက်ရှိမည် လုံးဝအသစ်သောမော်ဒယ်များနှင့်အတူသက်တမ်းတိုး။ နောက်ဆုံးရောက်ပြီ Exynos77904 အကြောင်းပါ, Mid-range ကိုများအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ပရိုဆက်ဆာသစ်။
ဤ Exynos77904 သည်အရေးကြီးသောတိုးတက်မှုကိုကိုယ်စားပြုသည် အလယ်အလတ်တန်းစား Samsung ပရိုဆက်ဆာများအတွက်။ ကင်မရာသုံးချောင်းကိုကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏အလယ်အလတ်တန်းစားသို့ပထမဆုံးအကြိမ်ယူဆောင်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စမှာတိုးတက်မှုကိုမျှော်လင့်ထားပါတယ် Galaxy M မော်ဒယ်တစ်လုံးသည်ကင်မရာသုံးချောင်းဖြင့်ရောက်လာလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ကောလာဟလများအရသိရသည်.
Samsung ကသူ့ရဲ့ပရိုဆက်ဆာအမျိုးမျိုးကိုအပြိုင်အဆိုင်ထိန်းထားရန်ကြိုးစားသည်။ ထို့ကြောင့် Exynos77904 တွင်အင်္ဂါရပ်အသစ်အနည်းငယ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သဖြင့်သင်သိသည် ကျနော်တို့မျှော်လင့်ထားနိုင်သည့်အရာကိုနှင့်အတူတက်စောင့်ရှောက် ယနေ့ Android ၏ အဲဒါဟာအလုပ်နဲ့သက်ဆိုင်မလား။
1 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် Exynos77904
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် Exynos77904
Samsung ကဒီ processor ကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ယခုအချိန်အထိမည်သည့်ဖုန်းများအသုံးပြုမည်ကိုအတည်မပြုရသေးပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီသတ်မှတ်ချက်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်, ထူးဆန်းသည်မှာ Galaxy M ၏အကွာအဝေးအတွင်းရှိစမတ်ဖုန်းအချို့သည်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ ဒီ Exynos77904. ကိုသွားပါ။ ကံကောင်းတာက၊ ဇန်န ၀ ါရီလ ၂၈ ရက်နေ့မှာအကွာအဝေးအပြည့်တင်လိုက်ရင်အဲဒီသံသယကိုရှင်းနိုင်မှာပါ။ ပရိုဆက်ဆာအတွက်မူ၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များမှာ -
CPU ကို:2x Cortex-A73 1.8 GHz အမြန်နှုန်းနှင့် ၆ x x Cortex-A6 53 GHz နှုန်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်
GPU ကို: မာလီ-G71 MP2
modem: LTE အထောက်အပံ့ဖြင့် Cat 123CA (၆၀၀ Mbps အထိဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူပါ) နှင့် Cat 600 13 CA (2 Mbps အထိတင်ပါ)
ဆက်သွယ်မှု: Bluetooth 5.0, WiFi 802.11ac, GPS၊ GLONASS, BeiDou, Galileo, FM ရေဒီယို
သိုလှောင်မှု: eMMC 5.1
နောက်ကင်မရာများ - သုံးဆနောက်ဘက်ကင်မရာအထိထောက်ပံ့သည်။ တစ်ခုတည်းသောကင်မရာတွင် 32 MP အထိထောက်ပံ့သည်
ရှေ့ကင်မရာများ - ရှေ့ကင်မရာ ၂ ခုအထိထောက်ပံ့သည်၊ တစ်ခုတည်းသောကင်မရာအတွက်2MP အထိထောက်ပံ့သည်
Samsung ကမင်းကိုချစ်တယ် ဆက်သွယ်မှုကိုအထူးဂရုပြုပါ ဒီအသစ်က Processor ကိုရန်။ အထူးသဖြင့်ဤကိစ်စနှင့်စပ်လျဉ်း။ မြင့်မားသောအကွာအဝေးအတွင်းရှိပရိုဆက်ဆာများသာဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤ Exynos77904 ဖြင့်ကိုရီးယားကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်၎င်းကိုပြောင်းလဲလိုသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူအလယ်အလတ်အဆင့်သို့ရောက်ရှိသည်။
တစ်ဖက်တွင် LTE အထောက်အပံ့ကိုပေးထားသည် download speed 600 Mbps အထိရှိသည်။ upload speed သည် 150 Mbps အထိမြန်နှုန်းရှိသော်လည်း၎င်းသည်ဤပရိုဆက်ဆာသည်များစွာသောဖြည့်ဆည်းပေးမည့်ရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင် GPS ချစ်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုရှိပြီး Galileo၊ GLONASS သို့မဟုတ် BeiDou ကဲ့သို့သောအခြား protocol များလည်းရှိသည်။
အသုံးပြုသူများစွာအတွက်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်တစ်ခုမှာနိဒါန်းသို့မဟုတ်ထိုအရာသည်ဖြစ်သည် FM ရေဒီယိုကိုသိမ်းထားပြီ။ Android ရှိကုန်အမှတ်တံဆိပ်များစွာက၎င်းကိုဖယ်ရှားရန်အလောင်းအစားဖြစ်သည်။ သို့သော် Samsung ကဆက်လက်ထားရှိရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ကြွင်းသောအရာအဘို့, ကနှင့်အတူရောက်ရှိလာသည် Wi-Fi 802.11ဘယ်အချိန်ရောက်မယ်ဆိုတာမသိဘဲနဲ့ ဝိုင်ဖိုင်6။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, Exynos77904 ၏အရေးအကြီးဆုံးအင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုကလိမ့်မည်ဖြစ်သည် သုံးဆနောက်ဘက်ကင်မရာကိုထောကျပံ့။ ရှေ့ကင်မရာအတွက်ဆိုရင်တော့မှန်ဘီလူးနှစ်ခုကိုထောက်ပံ့ပေးမှာပါ။ ဒါကြောင့်ဆိုလိုတာကဒီကင်မရာသုံးလုံးဟာကိုရီးယားမော်ဒယ်သစ်တွေနဲ့အတူကိုရီးယားကုမ္ပဏီအလယ်အလတ်တန်းကို ၀ င်ရောက်လာတယ်။
Samsung မှာရှိပြီးသားဆိုတာသတိရပါ နောက်ကင်မရာများစွာပါသောမော်ဒယ်လ်နှစ်ခု Galaxy A9 2018 ဘယ်လိုနေလဲ။ ကင်မရာလေးလုံးနှင့်အတူ နှင့်ရှိသည့် Galaxy A7 2018 သုံးဆနောက်ဘက်ကင်မရာ။ ထို့ကြောင့်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ၄ င်း၏ဖုန်းများရှိကင်မရာများကိုလောင်းကစားခြင်း၏ဤညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာလိုသည်မှာရှင်းနေပါသည်။
အခုအတွက်တော့, Exynos77904 ကိုမည်သည့် Samsung ဖုန်းဖြင့်အသုံးပြုမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိသေးပါ။ ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ကသူ့ရဲ့တင်ဆက်မှုမှာအိန္ဒိယဈေးကွက်ကိုစိတ်ထဲရောက်နေတဲ့ပရိုဆက်ဆာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောပေမယ့်မကြာခင်ငါတို့သိတော့မယ်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Galaxy M. စတင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများပေါ်ပေါက်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာမီထပ်မံကြားရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Exynos77904 - အလယ်အလတ်တန်းစားအတွက် Samsung ပရိုဆက်ဆာအသစ်
စျေးပေါသောဖုန်းများရှာဖွေနေပါသလား။ ယူအက်စ် ၃၀၀ ထက်မနည်းသောဤအမေဇုံသဘောတူညီချက်များကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့်
ဂရပ်ဖစ်အတွက်အလွန်ကောင်းသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သော Forged Fantasy တွင်သူရဲကောင်းများအသင်းကိုဖန်တီးပါ